La dagaalanka Caadoyinka Xun xun. - Cakaara News
La dagaalanka Caadoyinka Xun xun.
Ceelkari(Cakaaranews) talaado, 29ka March, 2016 waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Ceelkari ee xarunta degmada ceelkari gobolka afdheer tababar ay ujeedadiisu ahayd la dagaalanka iyo dabar goynta caadooyinka xun-xun.
Tababarkaa oo uu soo agaasimay xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta ee degmada ceelkari ayaa waxa loo qabtay 323 qof oo ka socday 15 qabalee oo ka mid ah degmada ceelkari kuwaasi oo iskugu jiray dhalinyaro, haween culimo awdiin iyo waxgarad iyada oo ay soo xidhitaankii tababarkaasi ay ka soo qayb-galay masuuliinka socday maamulka gobolka, iyo masuuliyiinta degmada ceelkari.
Tababarkaasi oo socday mudo todobaad ah, ayaa waxa xidhitaankiisii ka hadashay Madaxa xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta ee degmada ceelkari marwo Suufiya Xaaji oo sharax dheerka bixisay dhibaatooyinka ay leeyihiin caadooyinka xun-xun ee soo jiraanka ah gaar ahaan dhibaatooyinka ay ku hayaan haweenka sida gudniinka fircooniga ah iyo guurka deg deg ah. Waxayna ka warbixisay jihooyinka iyo qorshayaasha u dajisan xukuumada DDSI ee lagu cidhibtirayo caadooyinka xun xun iyada oo ku boorisay ka qaybqaatayaashii tababarkan in ay sidii loogu talagalay u fuliyaan cilmigii ay ku barteen mudadii uu tababarku socday.